Hooyo Loo Haysto Inay Ilmaheedii Dishay Oo Soo Jiidatay Indhaha Caalamka - Jigjigaonline
[ November 14, 2019 ] Waa Maxay Saddexda Arrimood Ee Madaxweyne Farmaajo u sheegay ganacsatada Soomaalida ee Kenya	Somalida
[ November 14, 2019 ] Jilaaga caanka ah ee Akshay Kumar oo dhaawacmay	Wararka Caalamka
[ November 14, 2019 ] AKHRISO: Madaxweynaha DDS Oo Ka Hadlay Ururrada ONFL, Dulmi-diid, Doorashooyinka Iyo Arrimo Kale Oo Xaasaasi Ah	Somalida
[ November 13, 2019 ] Sacuudiga oo raalligalin ka bixiyay muuqaal la iskula simay u doodista xuquuqda haweenka iyo xagjirnimada	Wararka Caalamka
[ November 13, 2019 ] Somaliland: Ingiriiska Iyo Itoobiya Oo Magaalada Jigjiga Kaga Wada-hadlay Dhismaha Berbera Corridor	Somalida
HomeWararka CaalamkaHooyo Loo Haysto Inay Ilmaheedii Dishay Oo Soo Jiidatay Indhaha Caalamka
Hooyo Loo Haysto Inay Ilmaheedii Dishay Oo Soo Jiidatay Indhaha Caalamka
Dacwad oogeyaasha waddanka El Salvador ayaa racfaan ka qaadanaya go’aankii ay maxkamadda ku laashay dacwadii ka dhanka ahayd hooyo da’ yar oo lagu eedeeyay inay cunugeeda dishay.
Evelyn Hernández, oo 21 jir ah ayaa la fasaxay bishii lasoo dhaafay ee Agoosto, kiiskeeduna wuxuu soo jiitay indhaha caalamka.
Sanadkii 2016-kii, cunug yar oo ay markaas dhashay ayaa meydkiisa laga helay musqusha, xilli ay iyaduna suuxsaneyd.
Laakiin markii ay soo naaxday ayey sheegtay inuu kufsaday nin burcad ah isla markaana aysan ka warheynin inay uur lahayd.
Kooxda dacwad oogeyaaha ah, oo aan ku qancin xukunka maxkamadda, ayaa hadda doonaya inay isku dayaan sidii ay mar kale xabsiga ugu celin lahaayeen.
Xeer ilaaliyaha guud ayaa sheegay in kiiska Ms Hernández ka dhanka ah “loo waayay caddeymo ku filan oo muujinaya fal dambiyeed”.
Laakiin, qareenkeeda oo lagu magacaabo Bertha María Deleón ayaa tiri: “Waa ceeb in dacwad oogeyaashu ay wali haweeneydan ku raadiyaan fal dambiyeed, iyadoo aan la heynin caddeyn muujineysa inay dambi gashay”.
Hay’adda Amnesty International ayaa sheegtay in racfaanka laga qaadanayo xukunkii maxkamadda uu yahay wax laga “argagaxo”.
Ms Hernández ayaa sanadkii 2017-kii lagu riday xukun 30 sano oo xabsi ah, oo ay ku muteysatay dilka cunugeeda, ka hor inta aysan maxkamadda ugu sarreysa dalkaas baabi’inin xukunkaas.
Waxaa xornimadeeda dib loogu soo celiyay bishii Febraayo ee sanadkan. Waxay garsooreyaasha maxkamadda ugu sarreysa waddankaas amreen in dib loo billaabo dacwaddeeda, waxaana ugu dambeyn lasoo saaray xukunka lagu bariyeelay.
Habkii loola dhaqmay Ms Hernández ayaa sababay caro weyn oo ay muujiyeen hay’adaha iyo shakhsiyaadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ee gobolkaas iyo guud ahaan caalamkaba.
El Salvador ayaa leh mid kamid ah sharciyada ugu adag ee xaddiga in carruurta la iska soo rido ama uurka la iska soo xaaqo.
Sidey u dhacday arrintii ugu horreysay?
Ms Hernández ayaa aadday musqul ku taalla bannaanka guri ay ku leedahay baadiyada El Salvador, taariikhdu markii ay ahayd 6-dii bishii Abriil ee sanadkii 2016-kii.
Marka ay musqusha u baxeysay waxay dareemeysay xanuun dhinaca caloosha ah, dhiigna wuu ka socday, markii ay halkaas tagtayna way suuxday.
Hooyadeed ayaa isla markiiba isbitaal geystay, dhakhaatiirta ayaana u sheegay inay umushay gabadheeda.
Markaas da’deeda waxay ahayd 18 sano, hooyadeedna waxay sheegtay inaysan ka warqabin uurkeeda.
Waxaa xabsiga loo taxaabay ka dib markii cunugii ay dhashay oo meyd ah laga helay musqusha.
Markii hore waxaa lagu eedeeyay inay cunuga iska soo ridday, laakiin dib ayaa laga badday, waxaana laga dhigay inay dil ula kac ah u geysatay cunugga, maadaama ay uurkeeda qarisay isla markaana aysan isbitaal aadin.
Markii lagu riday xukunkii hore, qareennadeeda ayaa dadaal u sameeyay in dacwadda dib loo furo, iyagoo ku doodayay in baaritaanno la sameeyay ay muujiyeen in cunuggu uu u dhintay sabab caadi ah.
Ms Hernández ayaan hadda wax war ah kasoo saarin go’aanka cusub ee dacwad oogeyaasha.
Bishii Agoosto, iyadoo maxkamadda hortaagan markii dacwaddeeda la laalay ayey tiri: “Alle ayaa mahad leh, caddaalad ayaan helay”.
“Mustaqbalkeygu waa inaan waxbarashada sii wato oo aan horumar ka gaaro ujeeddooyinkeyga. Waan faraxsanahay”.
MUCJISO: Haweenay 73 Jir Ah Oo Mataano Dhashay
Madaxweynaha Turkiga Oo Kitaab QUR’AAN Ah Usoo Hadiyeeyey MW Mustafe Iyo Ujeeddada Reer Turkey Ah Oo Jigjiga Ku Sugan
Maxaa Ka Jira In Ururka ONLF Beddelay Mabaadi’dii Uu Hore U Aaminsanaa?